Guruubyada dalalka Megaways Guruubyada dalalka Megaways
Guruubyada dalalka Megaways waa ciyaar Afyare Big Time ay ciyaareyso ay isticmaala shirkadda ayaa Megaways engine. Tani waa engine oo dhan oo ku saabsan isu-gaynta guusha sugay. Waxaad ka heli humongous a 117,649 siyaabood ee suurtagal ah inay badiso kulankaan. Ciyaarta ayaa sidoo kale waxa uu dhigeeysa free muuqan in la iman wilds ballaariyo. Well, halkan waa ka badan. Kulankaan ayaa sidoo kale ka feature Superbet u jeclayd. Maxaa in aan jeclahay oo ku saabsan in la sii daayo ka Big Time? Waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah. Just akhri si aad u ogaato.
About Developer ee Guruubyada dalalka Megaways
Created by ciyaaraha waqti Big, Afyare this ayaa u badan si sugaynaa in. Waxay leeyihiin kulan badan oo cusub si ay credit.
Tani ciyaarta Afyare Superbet leeyahay 6 duntu iyo ma khadadka mushahar go'an. halkii ah 6 duntu kala sooc lahayn ku wareegsan muuqdo 2 in 7 Calaamooyinka oo bedbedelayaan la wareejin kasta. Sidaas, tirada siyaabo sidoo kale inuu ku guuleysto badala la wareejin kasta. Si aad ku guuleysan, waa in aad dalka Calaamooyinka isla on duntu ku xiga. Ka dib kasta bixiso, Calaamooyinka in ay keentay in kulankii ay yihiin xunxun ka duntu iyo calaamado dheeraad ah oo ka soo kor ku xusan photographers hoos. Tani waxay u dhaco ilaa ma jiraan isku guuleystay tagay. Tani ciyaarta Superbet xiiso leh waxaa la ciyaari karaa heerka ugu hooseeya ee 20p per wareejin in ay sida ugu badan ee 500 £ per Lataliyihii.
Waa wax aragga endearing. miino ayaa ka dhigi goob ugu fiican ee tallaabo buuxiyey oo ciyaarta sida Afyare ah. Playing qiimaha card ka samaysan Calaamooyinka qiimaha hoose ee ciyaarta Superbet this halka Calaamooyinka qiimaha sare jira oo dhan GEMS. qiyamka waxaa oo dhan u jeedi dhagax adag oo fiiriyaa dahab arrin. Kor duntu ku gaadhi ayaa ganaax la 4 calaamadaha kala duwan ee. Inta lagu guda jiro wareejin kasta, kaarka ugu dhaco, calaamadaha hoos ku duntu ka si aad u kordhiso of fursadaha guusha.
Waxay leedahay laba qaababka ugu muhiimsan bonus. Marka hore waxaa astaan ​​u tahay duurjoogta ah kuwaas oo u dhaqmo sida bedelkiisa oo dhan calaamado kale marka laga reebo calaamad miinada ah.
Markaasaa waxaa jira kala firdhiso ah kuwaas oo xarfaha G, The, L, iyo D. Caga afar oo dhan oo iyaga ka mid isku mar on duntu ka dhaliya ee ku wareegsan dhigeeysa oo lacag la'aan ah oo aad ka heli 12 dhigeeysa free. Markaasuu, Dabcan, waxaa jira feature Superbet kaas oo sida qayb muhiim ah oo ciyaarta.
Waa ciyaar fantastik dhisay Afyare in ay ku xiran tahay engine kulan gaar ah si loo soo jiito ciyaartoyda. Oo halkii si wanaagsan u sameeya. Waa mid ka mid ah kulan Afyare Superbet ugu madadaalo iyo xiiso leh in ay u soo ka banner Big Time.